သက်ကြီးရွယ်အိုများ သူငယ်ပြန်ခြင်း အတွက် နွားနို့သောက်ခြင်း။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » သက်ကြီးရွယ်အိုများ သူငယ်ပြန်ခြင်း အတွက် နွားနို့သောက်ခြင်း။
သက်ကြီးရွယ်အိုများ သူငယ်ပြန်ခြင်း အတွက် နွားနို့သောက်ခြင်း။
Posted by ခင်ခ on Jan 21, 2013 in Health & Fitness, Society & Lifestyle | 19 comments
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ တစ်စတစ်စ ပျက်စီးတာကို သူငယ်ပြန်တယ်လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်၊ ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ Dementia လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါက အသက်အရွယ် ကြီးမြင့်လာ လေ ဖြစ်ပွားနှုန်းများလေပါဘဲ။ အဲဒီလို သူငယ်ပြန်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ အမျိုးမျိူးရှိကြတဲ့ထဲက အဖြစ်များ ဆုံးကတော့ အယ်လ်ဇိုင်းမား(ALzheimer’s) ပါ။ အဲဒီရောဂါပြီးရင်တော့ Multi Infarct Dementia လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ထဲ မှာ သွေးကြောလေးတွေပိတ်တာတို့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ ဟိုနေရာပျက်ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ပြန်ရောဂါက ဒုတိယလိုက်ပါတယ်။
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာက အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။
အစောဆုံးအဆင့် early stage မှာတင် ရောဂါဖြစ်ပြီး ၂ နှစ်လောက်ကြာတဲံ အချိန်ဖြစ်ပါပြီ၊ အဲဒီစောတဲ့ အဆင့်တွေမှာ ဘာတွေစဖြစ်လာသလဲဆိုရင် လူနာဟာ အာရုံစူးစိုက်နိုင်တဲ့အစွမ် လျော့နည်းလာတယ်၊ ပျက်ယွင်းလာတယ်၊ memory impairment ဆိုတဲ့ သတိလက်လွှတ်တွေဖြစ်လာတယ် မှတ်မိနိုင်မှု့ နည်းလာ တယ် ပင်ပန်းတာတွေမလုပ်ချင်လာသလို စိုးရိမ်ပူပန်မှု့ တွေများလာတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်လာပါတယ်၊ အဲဒီကနေ ထပ်ပြီးရောဂါအဆင်တိုးလာရင် လူနာရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ပုံစံတွေ ပိုလုပ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်၊ ဥပမာ- စိတ်တိုတတ်သူက ပိုစိတ်တိုလာတယ်၊ ၀မ်းနည်းတတ်သူက ပိုပြီးဝမ်းနည်းလွယ်မယ်၊ စကားများများပြောတတ်သူက ပစိပစပ်များလာမယ်၊ အသန့် အပြန်ကြိုက်သူက ခြေ လက် ခဏခဏ ဆေးဖြစ်တာမျိုး လုပ်လာကြမယ် ဆိုလိုတာက အလိုမကျမှု့တွေ များလာသလိုဖြစ်လို့ စိတ်ခံစားမှု့ပိုလာကြတာပါ။
Intermediate stage အဆင့်ကတော့ ပထမအဆင့်အထက်က လက္ခဏာတွေထက် ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်၊ ၅% ကနေ ၁၀% ထိ အတက်ရောဂါရလာတတ်တယ်၊ ၀က်ရူးပြန်သလိုဖြစ်တယ်၊ နောက်တစ်ခုက အ၀တ်အစားဝတ် တဲ့အခါ ခက်လာသလိုဖြစ်လာတယ် ကြယ်သီးပေါက်တွေ တပ်ရခတ်လာတယ်၊ တဖြေးဖြေး အချိန်တို့ နေရာတို့ လွဲပြီးမှတ်ထားသလို လွဲပြီးပြောလာမယ်၊ တစ်ခါတလေ မနက်နဲ့ ညနေမှားလေ့ရှိမယ်၊ မိမိရောက်နေ တဲ့နေရာကိုပင် ဘယ်ရောက်နေ လဲ ပြန်မေးတတ်လာမယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် တွေ့မြင်ဘူးသူတွေ ကိုပင် မျက်စိ လည်ပြီး မှားလာတယ်၊ သူပြောတာတွေကို နားမလည်သလို နားထောင်ရ သူက ဖြစ်လာမယ်၊ စကားလုံးတွေ ဗလုံးဗထွေးဖြစ်လာမယ်၊အခေါ်အဝေါ်တွေမှားပြောလာမယ် အဲဒီလို ဥနှောက်ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှု့အားကျလာ တာတွေ ဖြစ် လာပါတယ်။
Final stage ကိုရောက်ရင်တော့ သူ့မိသားစုဝင်တွေကိုတောင် မသိတဲ့အထိဖြစ်တတ်လာတယ်၊ ပါးစပ်ကလည်း ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိ ပြောနေတတ်မယ်၊ အစားအသောက်နည်းတာ အချိန်မမှန်တာတွေဖြစ်လာမယ်၊ ဆီးတွေ ၀မ်းတွေတောင် မထိန်းနိုင်ဖြစ်တတ်လာတယ်၊ ခြေလက်တွေ ကလည်း ကွေးကောက်နေ တာတို့ တောင်းတင်းနေတာတို့ ဖြစ်လာတတ်တယ်၊ အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ အဆုတ်ရောင်တာတို့ ဘာတို့ဖြစ်ပြီး အစာကလည်း မစားနိုင်လို့ အိပ်ယာထဲလဲပြီး ဆီးဝမ်းတောင် မိမိကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်ဘဲ နောက်ဆုံးတော့ သေဆုံးတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်သွားတတ်ကြတာပါဘဲလေ။
အဲဒီတော့ ဒီအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုလေ့လာရင် ဦးနှောက်ကြီးတစ်ခုလုံးက ကျုံသွားတယ်၊ သေးသွားတယ်၊ အထဲမှာရှိနေတဲံ အရည်တွေရှိတဲ့ကန်၊ အခန်းတွေ၊ အကန့်တွေ က ကျယ်လာတယ်၊ ဦးနှောင့်အတွန့် ကြားတွေ လည်း ကျယ်လာတယ်၊ အဲဒီတော့ ဦးနှောင့်ကသေးသွားလို့ အဆန်ချောင်လာတယ်လို့ဆိုရမယ်၊ အဲလိုအဆန် ချောင်တာ ဘယ်အပိုင်းဖြစ်မလဲ လေ့လာတော့ ဦးနှောင့်ရဲ့ နဖူးပိုင်းနဲ့ နထင်ပိုင်းမှာတော့ ပိုပြီးသိသိသာသာ ကျုံသွားပါတယ်၊ ချောင်သွား တယ်ဆိုတာ သုတေသီတွေ CT scan အရ တွေ့ရကြောင်း မှတ်တမ်းပြုထားပါ တယ်၊ အလိုလိုဦးနှောင့်ကျူံခြင်းနဲ့အတူ အာရုံကြောဆဲလ်တွေ လျော့တာ ကိုလည်း သိသိသာသာတွေ့ရပါတယ်၊ အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါမှာ အာရုံကြောမှာရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ လျော့နည်းသွားတာပါ လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို အဲဒီ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါ အယ်လ်ဇိုင်းမားဖြစ်တဲ့သူတွေမှာ Aluminium အလူမီနီယမ် လို့ခေါ်တဲ့ ဒန်သတ္တူနဲ့ပက်သက်တဲ့အလူမီနီယမ်ဒြပ်စင်တွေ၊ ဦးနှောင့်ရဲ့ နေရာ အတော်များများမှာ သွားပြီးတော့စုနေတာ တွေ့ရပါတယ်၊ အဲဒီလိုဘာ လို့ဖြစ် သလဲ လေ့လာကြည့်တော့ သောက်တဲ့ ရေ နဲ့ အရည် တွေမှာ အလူမီနီယမ်တွေ ပါဝင်မှု့များလို့၊ နောက်တစ်ခုက ကျောက်ကပ်မကောင်း လို့ haemodialysis လုပ်တဲ့အခါ သွေးလှယ်ရတယ်၊ အဲဒီလို သွေးလှယ်တဲ့အခါ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ အလူမီနီယမ် ဓာတ်တွေက လာပြိးစုတာမျိုးလည်း တွေ့ရပါတယ်၊ နောက်အယူ အဆတစ်ခုက ကူးစက်ရောဂါပိုးတွေက အထူးသဖြင့် နှာခေါင်းကနေ ၀င်တယ်၊ အဲဒီဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးတွေနဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမားဖြစ်ခြင်းကလည်း စပ်ဆက် နေတယ် လို့ ယူဆခဲ့ကြတယ်၊ အထူးသဖြင့် herpes Simplex Type -1 ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုးကြောင့် ဟုသတ်မှတ်ထားတာပါ။
အယ်လ်ဇိုင်းမားနဲ့ သူငယ်ပြန်ခြင်း အတွက် ကုသမှု့နှင့်နေထိုင်ပုံကို ဆက်ရေးရရင်-
အဲလိုဆို အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့အမျှ ဒန်အိုး၊ ဒန်ခွက်နဲ့ ချက်ပြုတ်စားသောက်မှု့တွေကို ပြောင်းသုံး သင့်တာ သတိပြုမိတယ်၊ နောက်တစ်ခုက အယ်လ်ဇိုင်းမားနဲ့ သူငယ်ပြန်သူကို ပြုစုမယ့်သူဟာ စိတ်ရှည် သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်၊ လူနာအား ဆက်တိုက်ပြုစုခြင်းထက် အနားပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်၊ အိပ်ခြင်း စားခြင်း ကိုယ်ကာယ လုပ်ခြင်းကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကျင့်ပေးပါ၊ လူနာကိုပြုစုရာတွင် တဆင့်ချင်းစီ ရှင်းပြပေးဖို့လိုသလို စိတ်ရှုပ်ထွေးစေခြင်း အာရုံနှောက်စေခြင်း ဆူညံခြင်းမျိုးရှောင်ပေးပါ၊ မှတ်ဥာဏ်ကို အထောက်အကူပြုမယ့် ပစ္စည်းလေးတွေချိတ်ပေးပြီး အမှတ်အသားပြုပေးခြင်းဖြင့် မှတ်ဥာဏ်ကို ပြန်လည် ကျင့်ယူရပါမယ်၊ စိတ်ပျော်ရွှင်စေပြီး ပြန်လည်မှတ်မိတဲ့ စကားလေးတွေပြောပေးခြင်းတို့ ပြုသင့်ပါတယ်။
အယ်လ်ဇိုင်းမားနဲ့ သူငယ်ပြန်ခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းမှု့နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှု့တို့ သဟဇာတ မဖြစ်မှု့ကြောင့်ဟုယူဆသဖြင့် မိမိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည် အသက်အရွယ်အပေါ် လိုက်ပြီးပြောင်းလဲ လာနိုင်မှု့ကို ယေဘူယျကြိုသိထားပြီး ထိုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် မကျန်းမာမှု့ကြောင့်မဟုတ် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ခြင်းကြောင့် ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု့ဘဲလို့ စိတ်ကသိထားဖို့လိုပါတယ်၊ အဲလိုမဟုတ်ရင် မိမိကိုယ မိမိ စွမ်းဆောင်မှု့လျော့ တယ်ထင်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျမှု့ကနေ စိတ်ခံစားမှု့ကနေအခြေပြုကာ အယ်လ်ဇိုင်းမားတို့ သူငယ်ပြန်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အသက်လတ်ပိုင်းလောက်ကစပြီး မျက်စိသူငယ်အိမ်ရဲ့ နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ မျက်တွင်းမှန်ဘီလူး ဟာထူလာပြီး ပုံမှန်စာကြည့်နိုင်စွမ်းလျော့လာပါတယ်၊ အဲဒါကို အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု့ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ သက်ကြီးမှုန့် ( Presbyopia ) လို့ခေါ်ပါတယ်။
တစ်ချို့အသက်အရွယ်ကြီးလာသူတွေရဲ့ သောတအာရုံ နားနှစ်ဖက်တွင် အသံဗလံတွေ ဆူလာတတ်တာမျိုး၊ အသံမသဲကွဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ အဲဒါမိမိ ကြီးပြင်းရာပတ်ဝန်ကျင်အပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်လာတတ်တာ ပါ၊ ဥပမာ- အင်ဂျင်မောင်းစက်ခန်းမှာ နှစ်ပေါင်းကြာစွာလုပ်လာတဲ့သူဟာ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ မိမိအား ပြောသောအသံကို သဲကွဲစွာကြားနိုင်မှု့ အားနည်းလာတတ်ပါတယ်။
အသက်ကြီးလာခြင်းနှင့်အတူ နှလုံးရဲ့ အသားမျှင်တွေ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲလာတတ်လို့ နှလုံးသွေးကြော တွေဟာ မလွှဲမသွေ တောင့်တင်းသွားတတ်ပါတယ်၊
အဆုတ်တွေဟာ ကြွပ်ဆဆ်နေချိန်မှာ အေဲပာင်းအလဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြင်းထန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်သွားစေပါလိမ့်မယ်၊ အဆုတ်တွေရဲ့ ဆွဲဆန့်ကျုံ့ဝင်နိုင်စွမ်းအား လျော့နည်းသွားပြီး အဆုတ်တစ်ခုလုံး ဒါမှ မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း ပြိုကွဲသွားနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်အဆုတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှု့ ကောင်းမွန်နေစေရန် အသက် အရွယ်ရလာတဲ့အခါ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက်ပုံမှန်လျှောက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးရပါ့မယ်။
ကျောက်ကပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှု့ဟာ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ လျော့ပါးလာသလို ခန္ဓာကိုယ်က ပိုလျှံတဲ့ ရေ သတ္တုဓာတ်၊ သွေးမှ အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့ ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက်ဟာလည်း လျော့နည်းမှာဖြစ်ပါ တယ်၊အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်းမှာ သွေးကိုစစ်ပေးတဲ့ ကျောက်ကပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ဟာ ဆယ်နှစ်တစ်ကြိမ် ၁၀% လျော့တတ်တာတွေ့ရပါတယ်၊ ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးသူတို့ သောက်ရတဲ့ဆေးဝါးများလာပြီး အညစ်အကြေးကို စွန့်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်လာတတ်ပါတယ်၊ များသောအားဖြင့် ကျောက်ကပ်ဟာ ဦးနှောက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ ပီကျူထရီဂလင်းက ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ ဟော်မုန်းကို တုံ့ပြန်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု့ အားနည်းလာလို့ ရေဓာတ် ထိန်းဖို့ခက်လာကာ ဆီးခဏခဏ သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ ရောဂါမျိုးရတတ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေဟာ ရေအေးထက်ရေနွေးကြမ်းကို ပိုသောက် သင့်သလို ရေကိုလည်း ညီမျှအောင်ချိန်ဆ သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ အမလိင်ဟော်မုန်းလို့ခေါ်တဲ့ ဥအိမ်တွေက ထုတ်လုပ်တဲ့ Estogen ဟော်မုန်းတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းနဲ့အတူ ထူးထူးခြားခြား ယုတ်လျော့လာပြီး နောက်ဆုံးဓမ္မတာမပေါ်တော့ဘဲ သွေးဆုံး ခြင်းတွေအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအခါ အသားတွေပူလာတတ်တယ်၊ ယောနိခြောက်သွေ့လာတယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းတွေ အိမ်မပျော်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်၊အဲဒီမှာ အရိုးပွခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ နောက်ပြီး သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရောတွေ နိမ့်ကျပြီး သွေလွှတ်ကြောတွေ ပိတ်ဆို့မှု့နဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး နှလုံးရောဂါ ခံစား ရတတ်ပါတယ်၊ အစားအသောက်ပြောင်းလဲစားတတ်သလို သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်နည်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာခြင်းဟာ ရောဂါကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲ သဘာဝအရ ဖြစ်တတ်တာလို့သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးလာသူ အမျိုးသမီးများ အရိုးပွခြင်းမဖြစ်အောင် နှလုံးရောဂါ မ၀င်အောင် လေ့ကျင့် ခန်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့အစားအသောက်တွေ ကြိုတင်လေ့ကျင့် စားပေးကြဖို့လိုပါတယ်။
ရောဂါပြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့ T-cell တွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေမှာ လျော့နည်းလာတတ်ပါတယ်၊ အဲဒီလို ဆဲလ်တွေ ယုတ်လျော့လာလို့ တီဘီလိုမျိုးရောဂါ၊ ရေယုန်နာ၊ တုတ်ကွေးနဲ့ အဆုတ်နာတွေကို တွန်လှန်နိုင်စွမ်း ယုတ်လျော့နိုင်တာမို့ ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်ဝန်ကျင်ကိုလိုက်ပြီး နေထိုင်မှု့စနစ် ကိုက်ညီအောင်ပြုသင့်ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက ဆောင်မနက်စောစော ပြင်ပသွားရင် ခေါင်းစွပ်နဲ့ အနွေးထည်ဝတ်သွားတာမျိုး စသည့်ဖြင့်ပါ။
ဦးနှောက်ဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ ကျုံသွားတတ်ပါတယ်၊ ဒါဟာမှတ်ဥာဏ်ကျဆင်းနိုင်တဲ့ အကြောင်းပါ၊ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲက အယ်လ်ဇိုင်းမားတို့ သူငယ်ပြန်တာတို့ ဖြစ်စေတာပါဘဲ။ ဒါကြောင့် သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာရင် သင်္ချာတွက်ပါတဲ့။ ဆိုလိုတာက အမှတ်သင်္ညာကို အမြဲလေ့ကျင့်စေတဲ့သဘောပါ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကမ္မဌာန်းထိုင်တာတို့၊ တရားထိုင်တာတို့၊ ယောဂ ကျင့်စဉ် တို့နဲ့လည်း လုပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ရုပ်ဇီဝပြောင်းလဲမှု့ကြောင့် မှတ်ဥာဏ်နည်းခြင်းမှ ဖြစ်လာတဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမား ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ပြန် ခြင်းတို့မဖြစ်အောင် ဖြစ်လာပြီးမှကုသခြင်းထက် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့ ကြိုတင်ပြီး မှတ်ဥာဏ် စွမ်းအားလျော့မသွားအောင် နေထိုင်ခြင်းဖြင့် အယ်လ်ဇိုင်းမားနဲ့ သူငယ်ပြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့သုတေသီတွေ က အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့အမျှ အောက်ပါ အချက် ၄ ချက်ကို လုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ မိမိနှင့်သင့်လျော်သော လေ့ကျင်ခန်း ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက်ခြင်းပုံမှန်လုပ်ပါ
၂။ မိမိ ဥနှောက်မှတ်ဥာဏ်းကို အမြဲလေ့ကျင့်စေဖို့ သင်္ချာတွက်ခြင်း၊ စာကျက်မှတ်ခြင်းပြုပါ။
၃။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း သီခြားနေခြင်းထက် ၀န်းကျင်လေးတစ်ခုတွင်ပါဝင်နေထိုင်ခြင်းပြုပါ
၄။ လိုအပ်တဲ့ အဟာရ ကိုစားသုံးပေးပါ။
အဲဒါတွေကတော့ ကယ်လိုရီစားသုံးမှု့ကို လျော့ချပြီး ဗီတာမင်လုံလောက်အောင်စားပါ၊ ဆိုဒီယမ် အငန်ဓာတ် ကိုလျော့ချစားပြီး ရေကိုချင့်ချိန် လုံလောက်အောင်သောက်ပေးပါ၊ အနည်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုဘဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေပါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း အရက်သေစာသောက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပေးပါ အကယ်၍ ရှောင်ကျဉ်ရန်ခက်လျှင် အလွန်အကျွန်ဖြစ်အောင်မသောက်ပါနှင့်၊ အရသာရိဖို့ထက် အဟာရဖြစ်အောင်စားပေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးမှာတော့ နွားနို့ဟာသက်ကြီးရွယ်အိုတို့အတွက် အသက်ရှည်စေတဲ့အစာဟုညွှန်းထားပါတယ်၊ ကယ်စီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းဟာ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ငုပ်လျိုးနေတဲ့ အန္တရာယ်ပါ၊ လူတွေရဲ့ အရိုးတွေဟာ အသက် ၅၀ ကျော်၊ အမျိုးသမီးများအတွက်သွေးဆုံးချိန်မှာ အရိုးတွေရဲ့ အရည်အသွေးလျော့တတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအခါ ခါးတွေပေါင်တွေ ခြေထောက်တွေနာကျဉ်တတ်မယ်၊ ခါးကုန်းလာတတ်တယ်၊ ပြီးတော့ သက်ကြီးရွယ် တွေမှာ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားလျော့မှု့၊ ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါနဲ့ အခြားဆက်စပ်တွေဖြစ်လာတတ်တာ မို့ နွားနို့ဟာ အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့ အစာအဖြစ် မှီဝဲသင့်ပါတယ်၊ သုတေသီများအဆိုအရ နွားနို့မှာ သွေးရည် ကြည်ဓာတ်ပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ထရစ်ပ်တိုဖန်း(Tryptophan) ရယ်၊ မော်ဖင်းတစ်မျိုးနဲ့တူညီတဲ့ သဘာဝမော်ဖင်းဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်၊ပြီးတော့ နွားနို့မှာ အာရုံကြောများ တက်ကြွမှုလှုံဆော်တဲ့ဓာတ်ကို ထိန်းချုပ် ပေးတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး၊ အဟာရများစွာပါဝင်တာကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများ နွားနို့ကို ပုံမှန် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် မှတ်ဥာဏ်လျော့ပါးမှု့ကင်းဝေစွာဖြင့် သက်ရှည်စွာနေထိုင်နိုင်ရေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကမ်ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံကလူတွေ အယ်ဇိုင်းမား ဖြစ်တာအနဲဆုံးလဲလို့ရီဆက်ရ်ှတွေလိုက်လုပ်ကြတော့
အိန်ဒိယ က လူတွေက အယ်ဇိုင်းမား ဖြစ်တာအနဲဆုံးပဲတဲ့
ဒါနဲ့ .. ဘာကြောင့် ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ဒီဖန့် စ် ဖြစ်ရသလဲ ဆက်ကြည့်တော့ ၊ အိန်ဒိယ က လူတွေဟာ တစ်နှစ်ကို တစ်ခြားနိုင်ငံကလူတွေထက် နနွမ်းပိုစားကြလို့ ပါတဲ့
ဆိုတော့က… ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေလဲ နေ့ စဉ် ဟင်းချက်တဲ့အခါ နနွမ်းမှု န့်မကင်းကြပါဘူး
သို့ ပေသည့်… အင်တွေဖြစ်နေတာကလား
အရောင်တင်မှုန့်နနွမ်းမှုန့် ရောင်းတဲ့သူတွေ ကျန်းမာကြပါစေ ချမ်းသာကြပါစေ
ဆရာပေ ရဲ့ ဦးဆုံးကွန်မန့်အတွက်ကျေးဇူးပါ။ အိန္ဒိယ လူမျိုးတွေက နွားနို့နဲ့ နနွင်းကို အတော်သုံးစွဲကြပါတယ်။ နနွင်းကလည်း ကျန်းမာရေးကို အတော်အထောက်အပံပေးပါတယ်။
နွားနို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးကိုတော့ ပိုစ့်နဲ့လည်းအကျုံးဝင်တာနဲ့ အောက်ကွန်မန့်မှာ သေချာပြန်ရေးပေးပါမယ့်ဗျ။
အောက်ကဇယားအရဆိုရင်တေ့ာ.. မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းတွေထဲ.. အိန္ဒိယကအနည်းဆုံးသဘောရှိတယ်..
27	Laos	11.0
28	Bangladesh	11.0
75	Myanmar	7.4
111	Thailand	3.2
112	China	3.2
116	India	3.1
အောက်ကသတင်းအရ.. နွားနို့ဟာ.. သူငယ်ပြန်ရောဂါကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့..
Milk ‘reduces Alzheimer’s disease’ – Health news – NHS Choices
by NHS Choices – 2011
Mar 3, 2009 – Drinking milk can prevent brain shrinkage and Alzheimer’s disease according to press reports. We look at the research behind these unusual …
DAIRY CONSUMPTION CAUSES ALZHEIMER’S DISEASE
DAIRY CONSUMPTION CAUSES ALZHEIMER’S DISEASE ALZHEIMER’S DISEASE AND DAIRY Scientists provide the clue, and you can now complete the …
Milk and Alzheimer’s Disease
A 2002 issue of the New England Journal of Medicine (Volume 346:476-483, Number 7) containedastudy proving that the risk of Alzheimer’s Disease doubles for those people with the highest levels of homocysteine in their bloodstreams.
Because of this article, some researchers hypothesized thatadiet based on dairy products could be one of the leading causes of the disease. Asamatter of fact, milk contains twice as much methionine (a protein that once ingested converts to homocysteine) as does soy milk, and cheese about 20 times as much (by the way, so does chicken). But of course, these were just hypotheses.
More recently, in 2009, Dr Anna Vogiatzoglou and colleagues from the University of Oxford and universities in Norway carried outarelated research, which was published in the peer-reviewed American Journal of Clinical Nutrition.
This study looks at the relationship between intake of various dietary sources of vitamin B12, and levels of the vitamin in the blood. Vitamin B12 is found in foods such as dairy products, meat, fish and eggs. The participants in this study were taken fromalarge population-based study in Norway called the Hordaland Homocysteine Study II.
Levels of vitamin B12 in the blood showedalink with total levels of vitamin B12 intake in the diet. When looking at specific dietary sources, levels of B12 in the blood showed the greatest link (correlation) with levels of dairy product intake, particularly milk, followed by intake of fish. This meant that individuals withahigher milk and fish intake showed higher levels of vitamin B12 in their blood.
The researchers concluded that milk and fish in the diet are significant contributors to levels of vitamin B12 in the blood. Why is this important? Another study, published in 2008, foundalink between low vitamin B12 levels in elderly people and brain shrinkage.
As stated by Professor David Smith, from the Oxford Project to Investigate Memory and Ageing, this study shows that consuming around halfalitre of milk or more per day could take someone who has marginal levels of B12 into the safe range. Therefore, as reported in The Daily Telegraph, two glasses of milkaday could help protect against Alzheimer’s Disease.
သူကြီးရဲ့ ဆန်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ သတင်း ၂ ခုကိုပြန်ပြီးရှင်းပြပါရစေ။
ပထမ သတင်းအရ ( နွားနို့ဟာ.. သူငယ်ပြန်ရောဂါကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့..) ဆိုလိုတာက သဘာဝနွားနို့ကို ကျိုပြီး သင့်ရုံ ပုံမှန်သောက်ခြင်းဖြင့် သူငယ်ပြန်ရောဂါ အတွက်ကောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ သတင်းအရ ( နို့ထွက်ပစ္စည်းနဲ့လုပ်တာတွေဟာ. သူငယ်ပြန်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်ချေပိုပါတယ်တဲ့..) ဆိုတာကို ရှင်းရရင် နွားနို့နဲ့ပက်သက်ပြီး အယူအဆအမှားတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက-
၁။ နွားနို့ကိုကြာကြာဆူအောင်ကျိုရတယ် – နွားနို့ကို ဆူတာထက်လွန်ပြီး ကြာကြာကြိုရင် နွားနို့ထဲက အဟာရတွေကို ထိခိုက်ပါတယ်၊ အကြောင်းရင်းက အပူချိန်၊ ဒီဂရီမြင့်မားလေ နွားနို့ထဲက ဗီတာမင်တွေ ပရိုတင်းတွေမှာ ဓာတုတုံ့ပြန်ပြီး တခြားဒြပ်ပြောင်းလဲစေပါတယ်။
၂။ နွားနို့ကို ရေသောက်သလို သောက်လို့ရတယ် – နွားနို့များများသောက်လေ အားရှိလေထင်တယ်၊ မှားပါတယ်၊ နွားနို့ထဲမှာ အရည်ဓာတ်များစွာပါပေမယ့် စိမ့်ဝင်မှု့မြင့်မားတဲ့ အရည်မျိုးဖြစ်လို့ နွားနို့ အသောက်များရင် ချွေးထွက်များစေပြီး ရေဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆုံးရှုံးစေပါတယ်၊
၃။ နွားနို့သောက်ရင် ၀မ်းလျောတာ နွားနို့မကောင်းလို့တဲ့ – တကယ်တော့မဟုတ်ပါ၊ တစ်ချို့ခန္ဓာ ကိုယ်တွေဟာ နို့သကြားခံနိုင်ရည်မဲ့ခြင်း ( Lactose intolerance ) ကြောင့် နို့သကြားကို အစာကြေစေပြီး ရယူသုံးစွဲခြင်းမပြုနိုင်ဘူး၊ ဒါလည်းရောဂါတစ်ခုပါ။ တစ်ချို့ကလေးတွေ မိခင်နို့တိုက်ရင် ၀မ်းသွားတယ်ဆိုတာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဲလိုဖြစ်နေလို့ပါ၊ အဲဒါလိုခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ရင် နို့ချဉ်ကို သောက်ပါ ကအဆင်ပြေသွားတာတွေ့ရပါမယ့်။
၄။ ပြုပြင်ထားတဲ့ နွားနို့၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း ပိုကောင်းတယ် – ဒီအပိုင်းကတော့ သူကြီးဒုတိယ သတင်းနဲ့ ပက်သက်ပါတယ်၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ နွားနို့၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ မူလ အဟာရဓာတ် ပျောက်သွားတာ တို့၊ လျော့သွားတာတို့ရှိနေပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နွားနို့ထဲကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ထည့်သွင်း လိုက်တာက စိုးစဉ်းဒြပ်စင်များနဲ့ အင်သြဂနစ်ဓာတ်ဆား ( Inorganic salts ) များဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ အဲဒီဒြပ်တွေဟာ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ပြုပြင်ထားတဲ့ နွားနို့နဲ့ နို့ထွက် ပစ္စည်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဟာ ဥနှောက်မှတ်ဥာဏ်ကိုလျော့စေလို့ပါဘဲ၊ ဥပမာ – အ၀လွန်မှာ ကြောက်လို့ အဆီထုတ်ထား ပြုပြင်ထားတဲ့ နွားနို့ကိုပုံမှန်သောက်တဲ့သူနဲ့ သဘာဝနွားနို့ တစ်ခွက်သောက်သူမှာ အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့သောက်သူဟာ အဟာရဘဲရပြီး မှတ်ဥာဏ်တိုးတက် ဖို့အထောက်အပံမဖြစ်ပါဘူး၊ တကယ်တော့ အဆီထုတ်စရာမလိုပါဘူး သဘာဝနွားနို့ကိုကျိုပြီး ဖြစ်လာ တဲ့မလိုင်ကို ဖယ်သောက်ရင် နှလုံးထိခိုက်မှု့နည်းပြီး အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
၅။ နွားနို့သောက်ရင် အပူကန်တတ်တယ် – တစ်ချို့ပြောကြတယ် နွားနို့သောက်လို့ အပူကန်တယ် ကလေးတွေသောက်ရင် အပူချောင်းဆိုးတယ် နွားနို့မတိုက်နဲ့တဲ့၊ အယူအဆမှားပါ၊ အဲဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးကျမ်းဖြစ်တဲ့ ကျုံးယောက်တော့ချီကျန် မှာ အခုလို ဆိုထားတယ် နွားနို့က အပူအင်အားမျှတပြီး ဆိမ့်တယ်၊ နှလုံး အဆုတ်ကို အကျိုးပြုတယ်၊ ဘေနဲ့ အစာအိမ်ကို အားကောင်းစေတယ်၊ အာခေါင်နဲ့ အူကိုစွတ်စိုစေတယ်၊ အချဉ်တက်တာ ရေငတ်လွန် တာနဲ့ ၀မ်းချုပ်တာကို ပျောက်စေတယ်တဲ့။ ပျက်လု လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကျမ်းမှာလဲ နွားနို့သည် အရသာဆိမ့်လို့ စဉ်းငယ်အေးတဲ့ သတ္တိရှိတယ် တဲ့၊ ထန်ခေတ် ဘယဆေးကျမ်းထဲမှာ နွားနို့ဟာ အပူအအေးမျှတယ် အပူအဆိပ်တွေကိုပျယ်ဆင်းစေတယ်လို့ညွှန်းပါတယ်၊ သမားတော်ကြီး လီရှိကျန်း AD1518 ပြုစုတဲ့ဆေးကျမ်းမှာ အပူကိုပယ်တယ်၊ ကလေးငယ်များနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ အဟာရဘဲလို့ ညွှန်းထားပါတယ်၊
သောက်ပုံသောက်နည်းသာ စနစ်တကျရှိဖို့လိုတာပါ။ ကလေးသူငယ်နဲ့ အသက်ကြီးသူတွေ တစ်နေ့ပုံမှန် သဘာဝနွားနို့ တစ်ခွက်သောက်ရင် ဆိုးကျိုးမရှိ အဟာရကောင်းစွာရပါတယ်။
၆။ နွားနို့ကို မနက်အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်ပြီးလျှင် နွားနို့တစ်ခွက်သောက်ပါက အလွန်သင့်လျော် ကောင်းမွန်လှပါတယ်လို့ တိုင်းရင်းဆေးကျမ်းက ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နွားနို့မှာ ပရိုတင်းကိုသာရရှိရုံမက ဦးနှောက်ကျန်းမာဖွံဖြိုးစေသော လက်ဆီသင်ပါရှိနေလို့ပါဘဲ၊ အဆီထုတ်နွားနို့မှာ အဆီနဲ့အတူ အဲဒီ ဦးနှောက်ဖွံဖြိုးစေတဲ့ လက်ဆီသင်ဓာတ်ပါ ပါသွားတဲ့အတွက် သူငယ်ပြန်ခြင်းကိုမကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်တဲ့။
၇။ နွားနို့ရဲ့ နောက်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုက ကားကြာရှည်မောင်းသူများ နွားနို့ပုံမှန်သောက် ကြည့်ပါ၊ အစာအိမ်လုပ်ဆောင်မှု့ကောင်းပြီး မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ သက်သာကာ ခန္ဓာကိုယ် စွမ်းအားပြန်တတ်စေပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ အမြဲလုပ်နေသူတွေ နို့ချဉ် သောက်ပေး ကြည့်ပါ။ နို့ချဉ်ထဲမှာ ဗီတာမင် A နဲ့ B ပါဝင်နှုန်းများလို့ရယ် ကယ်လ်ဆီယမ်ပါလို့မို့ မျက်ကြည်လွှာရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်တဲ့ဗျာ။
အဲဒီတော့ သူကြီးရေ နွားနို့ဟာ လူသားတွေရဲ့ နို့ထိန်းသည်ဖြစ်ပြီး လူသားများကျန်းမာရေးရဲ့ ကိုယ်ရံတော်တပ်မှုးပါလို့ ပြန်လည်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
သူကြီးရဲ့ ကွန်မန့်နဲ့ သတင်းလင့်တွေအတွက်လည်း ခင်ခ က ၀မ်းမြောက်စွာကျေးဇူးပါနော်။
ဒီလို ဗဟုသုတနဲ့ သတိထားစရာ လေးတွေကို အချိန်ယူတင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုခင်ခရေ။
ကြည့်ရတာသူကြီးလဲ ဟိုမေ့ ဒီမေ့ ဖြစ်နေတတ်သလား။
ကျွန်မ အနားက လူကတော့ အဲလိုဖြစ်မှာ ကြောက်နေလားတော့မသိ။
ကလေး ရဲ့ နင်တန်ဒို Game တွေထဲက Brain Training ကို အားတာနဲ့ တို့ နေတော့တာဘဲ။
ပြောရရင် အမှတ်သညာ အတွက် လေ့ကျင့်တာ လေကျင့်တာ တစ်ပိုင်း၊ ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို ဂရုမစိုက်လို့ မေ့တာက မေ့တာတစ်ပိုင်း ဘဲ။
အမှန်တော့ ALzheimer ကို မိန်းမတွေ က ဖြစ်ဖို့ Chance ပိုများတာကို ယောကျာင်္းတွေက ပိုကြောက်တတ်တယ်။
အဓိက,က.. နာမယ်တွေမေ့တာ..။ မှားခေါ်တာကရှိသေး…
အရီးခင်လတ်ရေ လူတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု့တွေကို မလွဲမသွေဖြတ်ကျော်ကြရမှာပါ။
အဲဒီအတွက် လေ့ကျင့်မှု့နဲ့ ဖြတ်ကျော်ကြရင် ဇရာအချိန်မှာ ကောင်းမွန်စွာနေကြရမယ်လို့
( အရီးရေ လို့ အရင်ကအတိုင်း ရင်းရင်းနှီးနှီးရေးမလို့ပါ၊ ဒါပေမယ့် ရွာထဲမှာ နောက် အရီး….. တစ်ယောက် တွေ့နေပြီမို့ မှားမှာဆိုးလို့ပါ။ အခုလို အရီးခင်လတ် ခေါ်ပေမယ့်လည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးလို့ဘဲမှတ်ပေးပါနော် အရီးရေ။ )
အယ်လ်ဇိုင်းမား early stage ကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသင်္ကာတော့ဘူး။
အသက်ကြီးရမှာထက် သူငယ်ပြန်မှာ အကြောက်ဆုံးပဲ။
ကိုယ့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပုံစံတွေ ပိုလုပ်ဖြစ်တယ် လို့ ခုဖတ်ရတယ်။
စိတ်ထဲရှိတာတွေ အမှန်အတိုင်း ပြောတယ်၊ ပြုမူတယ်လို့လည်း ကြားဖူးတယ်။
ဟီး။ အသက်ကြီးမှ ကိုယ့် စွဲလမ်းမှုပြသနာတွေ ပေါ်လာမှ ဖြင့်။
မခိုင်ဇာကလည်း အတွေးလွန်ပြန်ရော၊ ကျွန်တော်တို့ အရွယ်ကတွေးမိတယ်ဆို ထားပါတော့။
မကြောက်နဲ့နော် ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းဘဲဟာကို။
ဗဟုသုတ ရစရာလေးတွေ ရေး ပေးလို့ ကျေး ဇူးပါ။ ကျမ တို့အသိ အဖွား ကြီး တစ်ယောက် ဆို ဘာမှ မမှတ်မိတော့ ဘူး ။ အတူနေ ပြု စုပေးနေတဲ့ သမီးတွေ ကို လုံးဝ မမှတ်မိဘူး။ သူ့ ကို သမီးတွေ က အမေ လို့ ခေါ်ရင် မသိဘူး။ နာမည် ခေါ်မှ သိတယ် ။သမီးတွေ က သူ့ ကို သူငယ်ချင်းပြော ပြောပေးရတယ်။ သား သမီးတွေ ကို မသိတော့ ပေမယ့် သေသွားတာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ သူ့ ယောက်ျား ကျ အမြဲ မေးတယ်။ သေသွား ပြီ လို့ ပြောရင် လက် မခံ တော့ ခရီးသွားနေတယ်လို့ ပြောထား ရတယ်။ သူ့ ကိုယ်သူ အိမ်ထောင်ကျခါ စ လို့ ပဲ ထင်နေတယ်။ ညနေ ဆို သမီးတွေ က ရေမိုးချိုး သနပ်ခါး ဖီးလိမ်း ပေး ထား ပြီးရင် အိမ်ရှေ့ လေးမှာထိုင်လို့ သူ့ ယောက်ျား ကိုစောင့် နေရော။ မြင်ရတာ သနား ဖို့ လည်း ကောင်းတယ်။ သားသမီးတွေ လည်းတော်တော် စိတ်ရှည်ရတယ်။
မမိုချိုရေ ကျွန်တော် သက်ကြီးရွယ်အိုဂေဟာ တစ်ခုကို တိုင်းရင်းဆေးအဖွဲ့တွေနဲ့ တစ်ခါရောက်သွားတော့ အဲဒီမှာ အဖိုးအဖွားတွေကို ဘာသင်ပေးပြီး လုပ်ခိုင်းနေလဲသိလား၊ စက္ကူစာရွက်ခေါက်နည်းဖြင့် အရုပ်လေးတွေရယ် နဲ့ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာဘလောက်တုန်းလေးတွေနဲ့ ပုံဆက်တာတွေ သူအုပ်စုနဲ့ သူလုပ်ခိုင်းထားတာတွေ့လို့ အဲဒီက မားသာကိုမေးကြည့်တယ်၊ ဘာလို့အဲလိုလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ မှတ်ဥာဏ်အစွမ်း ကျဆင်းမသွားအောင်လို့တဲ့လေ။ အင်း အတုယူမိတဲ့ အလေ့အကျင့်ဘဲလို့ အဲဒီတုန်းကတွေးမိတယ်ဗျ။
အသက်ရှည်မှာ ကြောက်တယ် … အသက်ကြီးလာမှ သူငယ်ပြန်ရောဂါဖြစ်လာရင်ဒုက္ခပဲလေ …
ကြွေးသစ်လဲ မချထားခဲ့မိတော့ စိုးရိမ်နေရတယ် …
နွားနို့မှန်မှန်သောက်ချင်ပေမယ့် နွားနို့မကြိုက်တဲ့ရောဂါကြောင့် သောက်လိုက်တာနဲ့ အန်ချင်တော့တာပဲ …
မဝေရေ အသက်ရှည်မှာ မကြောက်ပါနဲ့ ရောဂါကင်းအောင် နေထိုင်တဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်ဗျ။
တစ်ခုပါဘဲ ဘယ်အရွယ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်တစ်ခုတော့ လုပ်ပေးနေပေးပါ။ အလုပ်လုပ်နေခြင်းဟာ သက်ကြီးရွယ်မှာ အထီးကျန်ခြင်း သူငယ်ပြန်ခြင်းဖြစ်မှု့က လျော့စေပါခင်ဗျ။
နွားနို့မကြိုက်ရင်တော့ ပဲစားပေးပေါ့၊ ကုလားပဲတို့ ပဲထောပတ်တို့ များများစားပေးပါနော်။
လူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ…
တော်တော် ဗဟုသုတ ရရှိပါတယ်..
မွန်ကစ် နွားနို့လည်း ကြိုက်ပါတယ်.. သောက်လည်းသောက်ချင်ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ ခုခေတ်အနေနဲ့ နွားကို ကိုယ်တိုင်မွေးမြူ.. ကိုယ်တိုင် နို့ညစ်သောက်မှ အစဉ်ပြေမယ်နဲ့တူတယ်..
ရောင်းနေတဲ့နွားနို့တွေက ကြာကြာခံအောင် ဖော်မလင်ဆေးရည် ထည့်ထားတတ်တယ်ဆိုလို့ ခုဆို လုံးဝ မသောက်ရဲအောင် ဖြစ်နေပီ.. ဒိန်ချဉ်လောက်ဘဲ သောက်ဖြစ်တော့တယ်……
နွားနို့တော့ အမြဲ သောက်လေ့ မရှိပေမဲ့.. စတိုးဆိုင်မှာ ပုလင်းနဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ အသင့်သောက်သုံးရန် နို့ကိုတော့ ကြိုက်တယ်.. ဈေးထဲက ၀ယ်ပြီး ကြိုသောက်တဲ့ နို့ဆိုရင် မလိုင်တွေ အရမ်းတက်လို့ စိတ်ညစ်တယ် မသောက်ချင်ဘူး။
အသက်ကြီးရင် သူငယ်ပြန်တဲ့ ရောဂါတော့ မဖြစ်ချင်ဘူး.. ဖျားပြီး ပဲ သေချင်တယ်။ သူများကိုလည်း ဒုက္ခမပေးချင်ဘူး။ သူများ ပြုစုခံရတဲ့ ဘ၀ က ကံကောင်းတယ် ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့် အရိုးတောင် ကိုယ်မသယ်နိုင်တဲ့ ဘ၀ တော့ မဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အခုကတည်းက မှတ်ဥာဏ်က ခဏခဏ မေ့တတ်တာ.. ကြီးရင်တော့.. ဘယ်လို လာ အုန်းမလဲ မသိဘူး။
လေးခရေ အရမ်းကို အကျိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ.. ကျန်းမာရေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အစားအသောက်တွေရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကို ပုံမှန်တင်ပြပေးနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ.. အမြဲတမ်းလည်း စောင့်ပြီးဖတ်နေပါတယ်ရှင်….
ကျေးဇူးပါ … ကျုပ်မတော့ နွားနို့ သောက်ကိန်းပါပဲ …
သတိဖေါက်ပေးသလို ခံစားရမိပါတယ် …
နက်ဖန်ကစ မှန်မှန် သုံးစွဲတော့မယ်ဗျို့ …
ဖတ်ရှု့ကာ ကွန်မန့်ပေးသူအပေါင်း အလွန်ကို ကျေးဇူးပါဗျာ။
ဒီပိုစ့်လေးက ရေးမယ်ဆိုခဲ့သမို့ အကြွေးမကျန်ရအောင် မျှဝေရေးလိုက်တာပါ။
ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ ရောင်းကုန်ရာသီကို တစတစရောက်လာပြီမို့
အဟုတ်တကယ် မအားပြီမို့ ကျုပ်တကယ် နားပြီဗျို့။